Zimbabwe Inosimbaradza Matanho Anotorwa Kana Vanhu Vochata
Kurume 29, 2012
Nyaya yekuti hurumende yakaburitsa gwaro remuchato idzva, iro rinenge riine mifananidzo yevachati, pamwe nekuisawo matanho ekuona kuti vanhu havazoroorani mumichato ine chitsotsi, iri kutambirwa zvakasiyasiyana nevanhu.
Matanho matsva ava kushandiswa aya akaparurwa svondo rino namabharani mukuru wenyika, VaTobaiwa Mudede.
Hurumende inoti iri kuita izvi senzira yekupedza huori muvanhu vari kushandisa michato iyi zvisiri pamutemo, zvikuru zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika zviri kupinda munyika zvichiroora madzimai emuZimbabwe zvechitsotsi kuitira kuti zviwane magwaro ekugara munyika zviri pamutemo.
Kutanga kwemwedzi, mumwe mudzimai wemuZimbabwe, Amai Evelyn Masaiti, vanowe mumiriri weDzivaresekwa muparamende, vakatadza kuchata nemudiwa wavo, VaProtais Pentecote Ayina, vekuCameroon, mushure mekunge mutongi wedare remejasitiriti kuMasvingo ati VaAyina vakanga vasina magwaro akakwana airatidza kuti vakanga vasina mumwe mudzimai kunyika kwavo.
Asi vaviri ava vati vakazokwanisa kuchata musi wa 20 Kurume, mushure mekunge vaburitsa zvose zvaidiwa nedare. Nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo zvakanyanya mumapepanhau nemumagungano evana veZimbabwe.
Sachigaro vesangano rePadare, VaJonah Gokova, vaudza Studio7 kuti hofisi yaVaTobaiwa Mudede haifainirwi kufungira madzimai zvinovachengetedza, asi kuti madzimai ndivo anofanirwa kubuda nezvaanofunga kuti zvakaanakira.
Amai Masaiti, avo vanowewo nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi vanoti vanotsigirawo maonero aVaGokova, vachiti komiti yavo iri kurwira kuti vanhu vose vapiwe mikana yakaenzana, kwete kungotarisa divi revanhukadzi chete.
Hurukuro naVaJonah Gokova pamwe naMai Evelyn Masaiti